Kutheni ii-IDE zibalulekile kwiNkqubo yePython
Umbuzo olungileyo ukubuza kukuba, kutheni ufuna i-IDE ukuze usebenze nePython ukuba isixhobo somgca wokuyalela sisebenza kakuhle? Ngalo mbandela, i-Python iza ne-IDE encinci ebizwa ngokuba yi-Integrated DeveLopement Environment (IDLE). Uninzi lwabantu mhlawumbi luthandabuza isidingo sayo nayiphi na into eyongezelelweyo ngexesha lenkqubo yokufunda kwaye kunokwenzeka ukuba baphuhlise usetyenziso olupheleleyo. Ngelishwa, izixhobo eziza nePython zinomdla kwaye ziluncedo ekuqaliseni, kodwa azizukukunceda wenze usetyenziso oluluncedo ngokulula. Ukuba ukhetha ukusebenza nePython ixesha elide, usidinga ngokwenene isixhobo esingcono.
Ukwenza ikhowudi engcono
I-IDE elungileyo iqulethe isixa esithile sobukrelekrele. Umzekelo, i-IDE inokucebisa ngezinye iindlela xa uchwetheza igama elingalunganga, okanye inokukuxelela ukuba umgca othile wekhowudi awunakusebenza njengoko kubhaliwe. Ubukrelekrele obuninzi obuqulathe i-IDE, kokukhona kuya kufuneka usebenze nzima ukubhala ikhowudi engcono. Ukubhala ikhowudi engcono kubalulekile kuba akukho mntu ufuna ukuchitha iiyure ekhangela iimpazamo, ezibiziweyo iibhugi .
Ii-IDE ziyahluka kakhulu kwinqanaba kunye nohlobo lobukrelekrele ababunikezelayo, yiyo loo nto uninzi lwee-IDE lukhona. Unokufumana inqanaba loncedo olufunyenwe kwi-IDE enye ukuba alonelanga kwiimfuno zakho, kodwa enye i-IDE ihamba phezu kwakho njengenyama yenkukhu. Wonke umphuhlisi uneemfuno ezahlukeneyo kwaye, ke ngoko, iimfuno ezahlukeneyo ze-IDE. Inqaku kukufumana i-IDE ekunceda ukuba ubhale ikhowudi ecocekileyo, efanelekileyo ngokukhawuleza nangokulula.
Umsebenzi wokulungisa ingxaki
Ukufumana iimpazamo (iimpazamo) kwikhowudi yakho yinkqubo ebizwa ukulungisa ingxaki. Nokuba oyena mphuhlisi ubalaseleyo emhlabeni uchitha ixesha lokulungisa ingxaki. Ukubhala ikhowudi egqibeleleyo kwipasi yokuqala phantse akunakwenzeka. Xa usenza, kungunobangela wokubhiyozela kuba ngekhe kwenzeke rhoqo. Ngenxa yoko, amandla okulungisa ingxaki kwi-IDE yakho abalulekile. Ngelishwa, amandla okulungisa ukungalungisi kwezixhobo zemveli Python izixhobo phantse azikho. Ukuba uchitha naliphi na ixesha ekulungiseni ingxaki, ngokukhawuleza ufumana izixhobo zemveli ziyacaphukisa ngenxa yento abangakuxeleli yona malunga nekhowudi yakho.
Ezona IDE ziphambili ziphindwe kabini njengezixhobo zoqeqesho. Ukunikezelwa kweempawu ezaneleyo, i-IDE inokukunceda uphonononge ikhowudi ebhalwe ziingcali eziyinyani. Ukulandelwa kwezicelo yindlela ehlonishwayo yokufunda izakhono ezintsha kunye nokuhlonipha izakhono osele unayo. Inkqubela phambili ebonakala incinci elwazini inokuba yimali enkulu yokonga ekuhambeni kwexesha. Xa ujonge i-IDE, sukujonga nje izinto ezinokulungisa ingxaki njengendlela yokususa iimpazamo- zibone njengezixhobo zokufunda izinto ezintsha malunga nePython.
Ukuchaza ukuba kutheni iincwadi zamanqaku ziluncedo
Uninzi lwee-IDE lujongeka njengabahleli beetekisi ezintle, kwaye yile nto kanye. Ewe, ufumana zonke iintlobo zeempawu ezikrelekrele, iingcebiso, iingcebiso, umbala wekhowudi, njalo njalo, kodwa ekupheleni kosuku, bonke bangabahleli beetekisi. Akukho nto iphosakeleyo ngabahleli beetekisi. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba abaphuhlisi bePython bahlala begxila kwizicelo zesayensi ezifuna into ebhetele kunombhalo omsulwa, ukusebenzisa iincwadana kunokuba luncedo.
Incwadana yokubhala yahlukile kumhleli wombhalo kuba ijolise kubuchwephesha obuqhutywe sisazinzulu sekhompyuter yaseStanford uDonald Knuth obizwa ngokuba yinkqubo yokufunda nokubhala. Usebenzisa inkqubo yokufunda nokubhala ukwenza uhlobo lwenkcazo yekhowudi, amanqaku, ubalo lwezibalo, kunye nemizobo. Ngamafutshane, uvala inqaku lesazinzulu eligcwele yonke into efunekayo ukuze uqonde ikhowudi ngokupheleleyo. Ngokwesiqhelo ubona ubuchule beenkqubo zokufunda nokubhala ezisetyenziswa kwiiphakeji ezinexabiso eliphezulu njengeMathematika kunye neMATLAB. Uphuhliso lweencwadana zokubhala luhamba phambili kwi
Ungaqwalasela ingqokelela yezixhobo zeAnaconda kuba ikubonelela ngamava amakhulu okubhala kwePython, kodwa ikwanceda ukuba ufumane ubuchule obukhulu beenkqubo zokufunda nokubhala. Ukuba uchitha ixesha elininzi usenza imisebenzi yesayensi, i-Anaconda kunye neemveliso ezifana nayo zibalulekile. Ukongeza, iAnaconda isimahla, ke ufumana izibonelelo zenkqubo yokufunda nokubhala ngaphandle kweendleko zezinye iipakeji.
inqanaba lokutya lesizwe le-dysphagia 1
Ungayinyanga njani icandida albicans
ipilisi encinci emhlophe eyi-627
hydrochlorothiazide 12.5 iziphumo ebezingalindelekanga
ipilisi emhlophe ene-m367 kwicala elinye
Iipilisi ze-pantoprazole 40 mg
I-buspirone hcl 15 mg ephezulu